သင့်မှာ သွေးတိုးရှိနေရင် ဒီအမှန်အမှားတွေကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ် - Hello Sayarwon
နှလုံးနှင့်သွေးကြော ကျန်းမာရေး » သွေးတိုးရောဂါ
သင့်မှာ သွေးတိုးရှိနေရင် ဒီအမှန်အမှားတွေကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
Update Date စက်တင်ဘာ 3, 2021 .3mins read
သွေးတိုးဝေဒနာက အဖြစ်များတဲ့ ဝေဒနာတစ်မျိုးပါ။ WHO ရဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအရဆိုရင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၁၄% (၁.၁၃ ဘီလီယံ) ဟာ သွေးတိုးဝေဒနာခံစားနေရသူတွေပါတဲ့။ အမေရိကန်မှာဆိုရင်လည်း တိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့ ၄၅% လောက်က သွေးတိုးသမားတွေပါ။
သွေးတိုးဝေဒနာဆိုတာက နှလုံးသွေးကြောနံရံတွေကို ပြင်းထန်တဲ့ဖိအားသက်ရောက်တာဖြစ်ပြပါတယ်။ သွေးဖိအားဟာ ပုံမှန်အတက်အကျရှိနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေမယ့် သဘာဝကိုဆန့်ကျင်ပြီး ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဖိအားမျိုးကို သွေးတိုးတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီဝေဒနာဟာ နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ ဝေဒနာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဆေးမြီးတိုတွေ၊ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေ၊ ယုံတမ်းစကားတွေလည်း များတယ်ဆိုပါတော့။ ဒီလိုမျိုး ယုံတမ်းတွေ၊ တဆင့်စကားတွေများတာမို့ မလိုလားအပ်တဲ့အမှားတွေ ပြုမူမိတတ်ကြပါတယ်။
တခါတလေရောဂါပျောက်မယ်ထင်ပြီး ယုံတမ်းစကားတွေ ဆေးမြီးတိုတွေကို အသုံးချမိတာမို့ အခြေအနေပိုဆိုးသွားတာ ဒါမှမဟုတ် တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ကြုံရတာတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး နားလည်မှုလွဲမှားတာတွေလည်း အဖြစ်များတတ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သွေးတိုးဝေဒနာနဲ့ တစ်နှစ်ကို လူ ၇.၆ သန်းလောက် အသက်ဆုံးရှုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးစပ်ပြီး အဖြစ်များတဲ့ ဝေဒနာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် ယုံတမ်းအမှားတွေ၊ ဆေးမြီးတိုအမှားတွေလည်း ပိုများတတ်ပါတယ်။ ဒီမှားယွင်းသိမြင်ထားတဲ့ ယုံတမ်းစကားတွေက ဘေးအန္တရာယ်ဆီကို ပိုပြီး ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တာမို့ သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သွေးတိုးဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူသိများတဲ့ ယုံတမ်းအမှားတွေအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
၁။ သွေးတိုးက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ရောဂါမဟုတ်ဘူး – မှားပါတယ်။ သွေးတိုးက အန္တရာယ်ရှိရုံသာမက ဖြစ်ဖို့လွယ်သလို ဝေဒနာသည်လည်းများတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ လူတိုင်းနီးပါး သွေးတိုးနေတာမို့ သာမန်ရောဂါတစ်ခုလို့ ထင်မှတ်မှားစရာရှိပေမယ့် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ သွေးတိုးဝေဒနာသည် ၁.၁၃ ဘီလီယံရှိနေပြီး တစ်နှစ်ကို လူ ၇.၆ သန်း ဒီဝေဒနာကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူတစ်ယောက်မှာ သွေးတိုးဝေဒနာရှိနေပြီဆိုရင် နှလုံး၊ အသည်း၊ မျက်စိ၊ လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ယွင်းတာ၊ လေဖြတ်တာနဲ့ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတွေလည်း ကပ်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သွေးတိုးက မျိုးရိုးလိုက်တယ် – ဟုတ်ပါတယ်၊ သွေးတိုးက မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာချက်အရဆိုရင် အဘိုးအဘွားမှာ သွေးတိုးရှိဖူးရင် မြေးဖြစ်သူမှာ သွေးတိုးဖြစ်နိုင်ခြေ အလွန်မြင့်မားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးတိုးကို အဖြစ်စေနိုင်ဆုံးအကြောင်းအရင်းက မျိုးရိုးမဟုတ်ပါဘူး။ လူနေမှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးမှာ သွေးတိုးသမားရှိဖူးသလို ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်အောင်နေတတ်သူမျိုးဖြစ်နေမှ သွေးတိုးဖြစ်လာမှာပါ။
၃။ သွေးတိုးတာ အိုမင်းလာလို့ – သွေးတိုးဝေဒနာက အသက်အရွယ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးပိုင်းတွေမှာ ပိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းက အိုမင်းလာတာကြောင့်မဟုတ်ပဲ ဘဝတစ်သက်တာမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာ စားသောက်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပါ။ သွေးတိုးဖြစ်နိုင်ခြေကို အသက်အရွယ်နဲ့ ပိုင်းခြားမယ်ဆိုရင် ၁၈-၃၉ အရွယ်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၃၃.၂%၊ ၄၀-၅၉ အရွယ်မှာ ၆၃.၁% ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ သွေးတိုးရှိနေရင် လက္ခဏာတွေပြတယ် – သွေးတိုးဝေဒနာသည်တိုင်း ရောဂါလက္ခဏာပေါ်တတ်တာမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်မှာ သွေးတိုးရှိမရှိကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးမှသိနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ သွေးတိုးဝေဒနာသည်တွေရဲ့ ၁၅% လောက်က ရောဂါလက္ခဏာမပြတာမို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သွေးတိုးမရှိဘူးလို့ ထင်မြင်နေကြပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်သွေးတိုးကို Silent Killer လို့ ခေါ်ကြတာပါ။
၅။ ဆားလျှော့စားနေလို့ သွေးတိုးမပူရတော့ဘူး – WHO ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့တာ ဆိုဒီယံလိုအပ်ချက်က တစ်နေ့ကို ၅ ဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပမာဏက လူ့ကျန်းမာရေးအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ ပမာဏပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်နှစ်ကို လူ ၂.၅ သန်း ဆိုဒီယံချို့တဲ့မှုကြောင့် သေဆုံးနေကြပါတယ်။ ဆားအလွန်အကျွံစားတာက သွေးတိုးစေနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် လုံလောက်အောင် မဖြည့်တင်းနိုင်ရင်လည်း အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာကို သတိထားသင့်ပါတယ်။
CDC အကြံပေးချက်အရဆိုရင် အောက်ပါ အစားအစာ ၁၀ မျိုးဟာ နေ့စဉ် ဆိုဒီယံလိုအပ်ချက်ရဲ့ ၄၀% ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဆားကိုရှောင်ကျဉ်ပေမယ့် ဒါတွေစားပြီး ဆားဓာတ်ဖြည့်တင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒါတွေကတော့
ဘူရီတို၊ တာကို့စ်၊ ကော်ပြန့်၊
အသင့်စားခေါက်ဆွဲတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်စားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
၆။ ဆေးသောက်ပေမယ့် သွေးတိုးမပျောက်ရင် ဆေးဆက်မသောက်သင့်တော့ဘူး – သွေးတိုးဝေဒနာကို ဆေးဝါးနဲ့ ထိမ်းချုပ်ကြတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေမှာတော့ ဆေးဝါးတွေနဲ့ အဆင်မပြေတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သွေးတိုးသက် ရင့်နေသူမျိုးတွေမှာပေါ့။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံလာရရင် ဆေးဝါးကို ရပ်ပစ်တာမျိုးထက် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ကုထုံးပြောင်းတာက နည်းလမ်းမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ သွေးတိုးဝေဒနာကို ကုစားလို့ရတယ် – သွေးတိုးက ကုသနိုင်တဲ့နည်းမရှိပါဘူး။ သွေးတိုးကို ကုစားနိုင်တယ်လို့ဆိုလာရင် လိမ်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ ထိမ်းချုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ သက်သာလျော့ပါးအောင် ကုသတဲ့နည်းလမ်းတွေသာရှိပြီး လုံးဝပျောက်ကင်းအောင် မကုသနိုင်သေးပါဘူး။
အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကတော့ သင့်ရဲ့ သွေးတိုးဝေဒနာကို သက်သာအောင် ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆေးဝါးပုံမှန် မှီဝဲတာ စတာတွေပါပဲ။
၈။ သွေးတိုးက အမျိုးသားတွေမှာပဲဖြစ်တယ် – သွေးတိုးက ကျား၊ မ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတာတော့ အမှန်ပါ။ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ဆေးလိပ်၊ အရက်မှီဝဲမှုရှိတတ်တာမို့ အမျိုးသားတွေဟာ အသက်ကြီးရင့်လာချိန်မှာ သွေးတိုးဝေဒနာခံစားရဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက် ၆၄ နှစ်တန်းကိုကျော်လွန်လာရင်တော့ အမျိုးသမီးတွေက သွေးတိုးဖြစ်နှုန်းပိုမြင့်မားတာကို ထူးခြားစွာ တွေ့ရပါတယ်။
သွေးတိုးရောဂါ မဖြစ် အောင် အသက် ၃၀ မတိုင်ခင်မှာ ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ရမလဲ
ဆားဆိုတိုင်း သွေးတိုးစေတာ မဟုတ်ပါ။
သွေးတိုးသမားတွေ စားပေးရမယ့် အထူးအစားအစာများ
သွေးတိုးသမားဆိုတာ ဟိုဟာမတည့် ဒီဟာမတည့်နဲ့ဆိုတော့ စားရေးသောက်တာမှာ အင်မတန်ခက်ခဲတယ်။ ဒီလို သွေးတိုးသမားတွေ စားပေးရမယ့် အထူးအစားအစာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အခြားအာဟာရဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းများ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2021 .2mins read
အရေပြားရဲ့တာဝန်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်တာကနေ တားပေးဖို့ဆိုပေမယ့် အရေပြားကိုယ်တိုင်ကလည်း ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ ရှိပါတယ်။
အသားအရေနှင့် အလှအပ, ကူးစက်နိုင်သော အရေပြားရောဂါများ ဇန်နဝါရီ 12, 2021 .3mins read
နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ စိတ်သစ်၊ လူသစ်၊ ရည်မှန်းချက်သစ်နဲ့ “ငါတော့ ဒီနှစ် သေချာပေါက် ...
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း ဇန်နဝါရီ 6, 2021 .3mins read
Favipiravir ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်ထုတ်နိုင်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုဗစ်ကို ကုသနိုင်မှာလား။ လူတိုင်း သုံးလို့ရပါ့မလား။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, Corona Virus, COVID-19 ဇန်နဝါရီ 2, 2021 .2mins read
စောင့်ကြည့်စာရင်းထဲပါလာတဲ့ ကိုဗစ်မျိုးဗီဇအသစ် “ မျူ”
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မေမေတွေ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ရလား…..
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 16, 2021 .2mins read
ကိုဗစ်မျိုးဗီဇအသစ် lambda variant
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 12, 2021 .2mins read